खोप लगाएर फर्किदा झेल्नुपरेको खोलामा उर्लेको त्यो बाढी... - हेल्थ आवाज
गृहपृष्ठ ∕ अन्तर्वार्ता / विचार ∕ खोप लगाएर फर्किदा झेल्नुपरेको खोलामा उर्लेको त्यो बाढी…
खोप लगाएर फर्किदा झेल्नुपरेको खोलामा उर्लेको त्यो बाढी…
सविना शाही अनमी |आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | बराहताल-०१, तेलपानी | सुर्खेत बिहीबार, २०७७ साउन ८ गते, १२:४५ मा प्रकाशित
म सुर्खेत जिल्ला बराहताल गाउँपालिका—०१ मा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, तेलपानीमा अनमीमा रुपमा कार्यरत छु । यो सुर्खेतको विकट पहाडी इलाका हो । यस वडामा टाढा—टाढा छरिएर रहेका स—साना वस्तीहरु छन् । गाउँमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका अनेकन समस्या छन् । तर, हामी मानिसहरुका स्वास्थ्य समस्या नजिकबाट अनुभूत गर्न पाएको र उहाँहरुलाई थोरै भएपनि सेवा दिन पाएकोमा खुशी छौं ।
यो गाउँपालिकाको पहाडी वस्तीमध्ये वडा नं. १ मा पर्ने सुंगुरखाल पनि एक हो । त्यहाँका बालबालिकालाई खोप दिनुपर्ने थियो । सुंगुरखालमै खोपको नयाँ केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । पहाडी भू—भागमा भएकाले वर्षायाममा झरी पर्ने बितिकै यो ठाउँका खोलानालामा उर्लेर बाढी आउँछ । तर, जतिसुकै कठिनाई भएपनि बालवालिकालाई समयमै खोप दिनुपर्ने दायित्वबाट हामी पछाडि हटन सक्दैन्थ्यौं । त्यसैले वडा नं. १ मा खोप दिने तीन दिने योजना तय भएको थियो ।
वडा नं. १ मा यसअघि २ वटा नियमित खोप केन्द्र थिए । वडा नं. १ को सुंगुरखालमा भने असार मसान्तमा नयाँ खोप केन्द्र थपिएको छ, यससँगै यस वडामा ३ वटा खोप केन्द्र भएका छन् । स्थानीयहरुलाई सहज होस् भनेर केही समयअघि मात्रै सुंगुरखालको खोप केन्द्र थपिएको हो । त्यही खोप केन्द्रमा खोप दिनका लागि ५ साउन मिति तय भएको थियो ।
म वीरेन्द्रनगरमा रहेको घर आएकी थिए । ५ साउनको विहान ७ बजे नै घरबाट खाना खाएर खोप केन्द्रका लागि हिडे । ८ बजे हामी बराहतालको हरिहरपुरमा जम्मा भयौं । हरिहरपुरमा स्वास्थ्य चौकी छ । हाम्रो खोप टिममा स्वास्थ्य चौकीका अहेब चन्द्रकिरण थापा, अनमी लक्ष्मी गौतम, म र एक जना सहयोगी दाइ थियौं । स्वास्थ्य चौकीमा जम्मा भएर हामी सवा आठ बजेतिर खोप केन्द्रतिर लम्कियौं ।
पहाडी इलाका, जंगलको उकालो—ओरालो, वर्षायामको चिप्लो बाटोको कष्टकर यात्रा पार गर्दै दिउँसो १ बजे सुंगुरखाल पुग्यौं । यो एकदमै विकट पहाडी इलाका हो । यहाँ घरहरु पनि टाढा—टाढा छन् । हामी त्यहाँ पुग्दा खोपका लागि ६—७ जना बालबालिका खोपको पर्खाइमा थिए । हामीले ती बालबालिकाहरुलाई बिसीजी, डिपीटी, पोलियो, पिसिभी र एफआईपीभीलगायतका खोप दियौं । गाउँलेहरुसँग हेल्थ एजुकेशनबारे अन्तरक्रिया गर्‍यौं । यो दुवै काम सकेर फर्किदा साढे दुई बजिसकेको थियो । हामी अफिस पुग्नुपर्ने थियो । मेरो अफिस बराहताल—१ तेलपानी पर्छ, पहिले यो स्वास्थ्य एकाई थियो । साउन एक गतेदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भएको छ । मसहित यो स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ३ जना काम गर्छौ ।
काम सकेर सुंगुरखालबाट फर्किदा पानी दर्किन थाल्यो । सुंगुरखालबाट फर्कने बाटोमा धेरै खोलाहरु पार गर्नुपर्छ । दिउँसोको ३ बजेको थियो होला । मैले खिचेर टिकटकमा पोष्ट गरेको भिडियोमा देखिएको खोलामा पुग्दा निकै ठूलो बाढी आइरहेको थियो । त्यो भिडियोको त एउटा खोलाको मात्रै हो, त्यहाँबाट फर्किदा यस्ता धेरै खोलामा हामीले ठूलो बाढीको सामना गर्नुपर्‍यो । केही समय रोकिएर पनि हामी खोला तर्न सक्थ्यौं । तर, पानी रोकिने छाटकाट पनि थिएन, रात पनि पर्न थालिसकेको थियो । त्यसैले समयमै खोला तरेर नहिड्दा साँझपख समयमा पुगिदैन्थ्यो । त्यही भएर हामीले खोलामा आएको भेल नै तरेर भएपनि हिड्ने योजना बनायौं । त्यही कतै नजिक बस्दा पनि भोलिपल्ट अर्को ठाउँमा खोप कार्यक्रम तय भएको थियो । हामीसँगै भ्याक्सिन क्यारियरहरु थिए । त्यही कारण पनि जसरी पनि फर्किनुपर्ने थियो ।
हामीले बोकेका झोला, खोपका राखिएका बट्टासहित एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै सबै खोलाको भेल तर्‍यौं । सुंगुरखालको एउटा खोलामा भेल तर्दै गर्दा मैले दाइ र दिदीहरू खोला तरिरहेको भिडियो बनाए । साँझ ७ः४० मा म बल्लतल्ल तेलपानी पुगे । चन्द्र सर सुर्खेत पुग्दा भने १० बजिसकेको थियो रे । कोठामा पुगेपछि राति १० बजेतिर मैले त्यो भिडियो आफ्नो टिकटक एकाउण्टमा अपलोड गरे । क्याप्सन लेखे, ‘खोप लगाउन जाँदा खोला आएर धन्न बगाको ।’ त्यो भिडियो त पछि सोसल मिडियामा भाइरल भएछ । हामीले त्यस्तो जोखिम मोलेर काम गरेको देखेर मानिसहरुले निकै बधाई दिनुभएछ, सयौंले सेयर गर्नुभएछ ।
मैले त टिकटकमा अपलोड गरेपछि हेरेकी पनि थिइन् । यहाँ इन्टरनेटको पनि राम्रो पहुँच छैन । हिजो ७ गते साँझ हेर्दाखेरि बल्ल भिडियो भाइरल भएको थाहा पाए । मैले त्यो भिडियो त्यतिकै पोष्ट गरेकी थिए । तर, भाइरल भएछ । हामी स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम मोलेर काम गर्दा आम मानिसले दिने यस्तै स्याबासी र वाहीवाहीले नै हामीलाई उर्जा दिन्छन् । मलाई अहिले हामीले जुन जोखिम मोलेर काम गर्‍यौं, त्यहाँका बालबालिकालाई खोप लगाएर फर्कियौं । मानिसहरुले त्यसैको प्रशंशा गरेका हुन जस्तो लाग्छ । भिडियोमा आइरहेको वाहीवाही र स्याबासीले अझ धेरै मेहनतका साथ काम गर्ने उर्जा प्राप्त भएको छ । नेपालका विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका झेल्नुपर्ने यी साझा समस्या हुन् । हामी त त्यसका एक प्रतिनिधी मात्रै हौं । नेपालभर पहाडी, तराई र हिमाली क्षेत्रमा घामपानी, बाढी, पहिरोको ख्याल नगरी काम गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी यो बधाई तथा सम्मानका पात्र हुनुहुन्छ ।
खोप लगाएर फर्किएका स्वास्थ्यकर्मी बाढी आएको खोला तरिरहेको भिडियो
हो यिनै हुन स्वास्थ्यकर्मी जो आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर देशका दुर दराजका आमा तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि खटिएका छन ! यो भिडियो हामिले सामाजिक संजाल बाट लिएका हौ ! यदि यो भिडियो खिच्ने वा भिडियोमा आफू भएको कोहि पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु हाम्रो पेजमा जोडिनु भएको छ भने कृपया सम्मान हामिलाई कमेन्ट वा म्यासेज गरिदिन अनुरोध छ !कृपया एक स्वास्थ्यकर्मीको नाताले आफ्नो फेसबुक बाल वा ग्रुपमा शेयर गरिदिनुहुन अनुरोध छ अझ सकिन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय आधिकारिक पेज हरुमा पुर्याउ, कम्तीमा राज्यका शासक र निति नियम बनाउनेको एक नजर पर्न सकोस - स्वास्थ्यकर्मी भगवान हुन !Solute.
Posted by Public Health Concern- जन स्वास्थ्य सरोकार on Tuesday, July 21, 2020
सरकारी चिकित्सकका साझा सवाल
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्न ढिलो भइसक्यो’
‘एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सक’सँग जोडिएको एक लाखको सपना
‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ : बिरामीदेखि चिकित्सकसम्मलाई फाइदै फाइदा
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री भन्छन्, ‘सरकारको पहिलो प्राथामिकता स्वास्थ्य परेको…
राज्यमन्त्री रावत भन्छन्, ‘सचिव आएको पनि थाहा भएन र गएको…